Drives & Disk မှ Outlook အီးမေးလ်များကိုပြန်လည်ရယူပါ
DataNumen Outlook Drive Recovery သည် Outlook အီးမေးလ်များနှင့်အခြားအရာဝတ္ထုများကို drives & disk မှတိုက်ရိုက်ပြန်လည်ရယူရန်အစွမ်းထက်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သည်ယခင်က Outlook PST ဖိုင်များကို local drives (သို့) disk များပေါ်တွင်သိမ်းထားပြီးပြီဆိုလျှင် Outlook data ကိုသင်မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မသုံးနိုင်ပါစေ၊ သင့်အတွက် data တွေကိုပြန်လည်ရယူရန်ဒီ magic tool ကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုနိူင်တယ်။
မှတ်စု: အကယ်၍ သင်၏ Outlook PST ဖိုင်သည်သင်၏ disk သို့မဟုတ် drive ထဲတွင်ရှိနေသေးလျှင် ကျေးဇူးပြု၍ အသုံးပြုပါ DataNumen Outlook Repair PST ဖိုင်မှအီးမေးလ်များနှင့်အခြားအရာဝတ္ထုများကိုပြန်လည်ရယူရန်။
အဘယ်ကြောင့် DataNumen Outlook Drive Recovery?
တကယ့်ကိုရှုပ်ထွေးခက်ခဲတဲ့ HDD တစ်ခုမှာ (နှစ်ခါ format) ပြီးပြည့်စုံတဲ့ပြန်လည်နာလန်ထူခဲ့တယ်။
အလားအလာရှိသောအရာကိုအောင် tool တစ်ခု!
Antonis N ကို
ဖေဖော်ဝါရီလ 27, 2021
Outlook .pst ဖိုင်များကို ဖျက်၍ Recycle Bin ကိုမှားယွင်းစွာသွန်ပစ်ပါ။
Outlook .pst ဖိုင်များကိုအမှားဖြင့်အမြဲဖျက်ပါ။
Outlook .pst ဖိုင်များပါ ၀ င်သော drive ကိုမှားယွင်းစွာပြင်ဆင်ပါ။
အမှားအယွင်းအားဖြင့် Outlook .pst ဖိုင်များပါသည့်အခန်းကန့်ကိုဖျက်ပါ။
အမှားနှင့် l အားဖြင့် disk ကိုပြန်လည်ခွဲဝေost .pst ဖိုင်တွေပါတဲ့ drive ။
ဟာ့ဒ်ဝဲပျက်ကွက်မှုကြောင့် .pst ဖိုင်များပါသော drive သို့မဟုတ် disk ကိုဖတ်။ မရပါ။
pst ဖိုင်များပါဝင်သော drive သို့မဟုတ် disk သည်မဖြစ်နိုင်ပါtarTR သို့မဟုတ်အသိအမှတ်ပြုခံရခြင်းသည် MBR၊ partition table သို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းပြချက်များကြောင့်အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများကြောင့်ဖြစ်သည်။
အထက်ဖော်ပြပါကိစ္စရပ်များနှင့်သင်၏ဒေသဆိုင်ရာ drives များသို့မဟုတ် disk များတွင်သိမ်းဆည်းထားသည့် Outlook အချက်အလက်များကိုသင်မရရှိနိုင်သည့်အခြားကိစ္စရပ်များအတွက်သင်အမြဲတမ်းအသုံးပြုနိူင်သည်။ DataNumen Outlook Drive Recovery.
အဓိကအင်္ဂါရပ်များ DataNumen Outlook Drive Recovery v8.6
32bit နှင့် 64bit Outlook 97 to 2019 နှင့် Office 365 အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။
မေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ ဖိုင်တွဲများ၊ posts, ချိန်း, အစည်းအဝေးတောင်းဆိုမှုများ, အဆက်အသွယ်များ, ဖြန့်ဖြူးစာရင်း, အလုပ်များကို, အလုပ်တောင်းဆိုမှုများ, ဂျာနယ်များနှင့်မှတ်စုများ။ ဥပမာ - ဘာသာရပ်၊ to၊ from, cc, bcc, date, စသည့်ဂုဏ်သတ္တိများအားလုံးကိုပြန်လည်ရရှိသည်။
ရိုးရိုးစာသား၊ RTF နှင့် HTML format ဖြင့်မေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျများကိုပြန်လည်ရယူရန်ထောက်ပံ့မှု။
မက်ဆေ့ခ်ျများနှင့် HTML ကိုယ်ထည်တွင်ထည့်သွင်းထားသောစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ပုံများအပါအဝင်ပူးတွဲဖိုင်များပြန်လည်ထူထောင်ရန်အတွက်အထောက်အပံ့။
ထည့်သွင်းထားသောအရာဝတ္ထုများ၊ Excel Worksheets, Word documents, စသည်တို့ကိုပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု
ပယ်ဖျက်လိုက်သော Outlook ပစ္စည်းများ၊ မေးလ်မက်ဆေ့ခ်ျများ၊ ဖိုင်တွဲများ၊osts, ချိန်း, အစည်းအဝေးတောင်းဆိုမှုများ, အဆက်အသွယ်များ, ဖြန့်ဖြူးစာရင်း, အလုပ်များကို, အလုပ်တောင်းဆိုမှုများ, ဂျာနယ်များနှင့်မှတ်စုများ။
16777216 TB (ဆိုလိုသည်မှာ 17179869184 GB) အထိကြီးမားသော drives များသို့မဟုတ် disk များမှ Outlook အချက်အလက်ကိုပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု။
Outlook အချက်အလက်များကို password ကာကွယ်မှုဖြင့်ပြန်လည်ရယူနိုင်ရန်အတွက် compressible encryption နှင့် high encryption (သို့မဟုတ်အကောင်းဆုံး encryption) နှစ်ခုလုံးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ သင့်တွင်စကားဝှက်မရှိပါကပင် Outlook ဒေတာကိုပြန်လည်ရယူနိုင်သည်။
ပုံသေ PST ဖိုင်ကို Outlook 97-2002 format နှင့် Outlook 2003-2016 format ထုတ်လုပ်ရန်ပံ့ပိုးသည်။
Outlook ၏အချက်အလက်များကို hard disk, flash drives, floppy disk များကဲ့သို့သောမည်သည့် drives သို့မဟုတ် disk မှမဆိုပြန်လည်ရယူနိုင်ရန်ကူညီသည်။ Zip disk များ၊ CDROM များစသဖြင့်
FAT, FAT32 ကဲ့သို့သော file system များမှ Outlook အချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု NTFS, Linux Ext2, Linux Ext3 စသည်တို့
ပျက်စီးနေသောမီဒီယာမှ Outlook အချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူရန်ပံ့ပိုးမှု။
drives တွေနှင့် disk တွေအစုအဝေးပြန်လည်ထူထောင်ရန်ထောက်ခံမှု။
အသုံးပြုခြင်း DataNumen Outlook Drive Recovery Outlook ကိုဒေတာများကိုပြန်လည်ရယူရန်
သင်သည်သင်၏ Drive (သို့) disk တွင် Outlook အချက်အလက်သိုလှောင်ထားသရွေ့သင်၏ Outlook အချက်အလက်များကိုပြန်လည်ရယူခြင်း (သို့) ရယူခြင်းမပြုနိုင်သောမည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မဆိုအမြဲတမ်းသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ DataNumen Outlook Drive Recovery သင့်အတွက် drives များသို့မဟုတ် disk များမှ Outlook အီးမေးလ်များနှင့်အခြားအရာဝတ္ထုများကိုပြန်လည်ဆယ်တင်ရန်။
မှတ်ချက်။ ။ Data Disaster သည်မကြာမီ SOURCE Drive (သို့) Disk တွင်တည်ရှိသည်သင်၏ Outletbook DATA ပေါ်ပေါက်လာပါက၊ Drive သို့မဟုတ်မည်သည့်အချက်အလက်ကိုမျှမပြောင်းလဲပါစေနှင့်။ DODR သည် drive မှသို့မဟုတ် disk မှ data များကိုသာဖတ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်ဒေတာကိုမဆိုမည်သည့်အရာမှ ရေး၍ မပြောင်းတော့ပါ။
မှတ်စု: ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းမတိုင်မီ Microsoft Outlook နှင့်အခြားအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုပိတ်ပါ။
သင်၏ Outlook pst ဖိုင်များမူလသိမ်းဆည်းထားသည့်ယုတ္တိဗေဒ drive သည်တည်ရှိနေသေးပြီး၎င်း၏အရွယ်အစားနှင့်တည်နေရာကိုမူမပြောင်းလဲပါကစကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်အတွက်ထို drive ကိုရွေးချယ်ပါ။
မဟုတ်ပါက disk ၏ပြန်လည်ခွဲခြမ်းမှုကြောင့်ယုတ္တိ drive ကိုမတည်ရှိတော့ပါက lost MBR သို့မဟုတ် partition သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်အခြားအကြောင်းပြချက်များသို့မဟုတ် logical drive ကိုအရွယ်အစားသို့မဟုတ် Partition Magic ကဲ့သို့သော partition tools များဖြင့်ပြန်လည်နေရာချထားလျှင်၊ pst ဖိုင်များကိုသိုလှောင်ရန် hard disk တစ်ခုလုံးကို source disk အဖြစ်သတ်မှတ်သင့်သည်။
ဖြုတ်တပ်လို့ရတဲ့ disk ကိုကွန်ပျူတာကိုသင်တပ်ပြီး (သို့) ထွက်လိုက်ရင်၊ DataNumen Outlook Drive Recovery စတင်သည်, ထို့နောက်သင်ကလစ်နှိပ်ပါနိုင်ပါတယ်
combo box ထဲရှိ drive နှင့် disk list ကို refresh လုပ်ရန်
သင်ပြန်လည်ရယူမည့်အရင်းအမြစ် Outlook အချက်အလက်များ၏မူကွဲကိုသိလျှင်၊ ၎င်းကို combo နေရာတွင်သတ်မှတ်နိုင်သည်
disk သို့မဟုတ် drive ကို combo box ကိုအနားမှာ။ Form ကို "Auto Determined" ထားခဲ့ရင်၊ DataNumen Outlook Drive Recovery အလိုအလျှောက်၎င်း၏ format ကိုဆုံးဖြတ်ရန်အရင်းအမြစ် Outlook ကဒေတာ scan ပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ဤသည်အပိုဆောင်းအချိန်ယူပါလိမ့်မယ်။
ကျေးဇူးပြု၍ output ဖိုင်အမည်ကိုသတ်မှတ်ပေးပါ။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း, DataNumen Outlook Drive Recovery သင်ရွေးချယ်ထားသော disk မှသို့မဟုတ် drive ထဲမှ Outlook အချက်အလက်အားလုံးကိုပြန်လည်ရယူလိမ့်မည်။ ထို့နောက်ပြန်လည်သိမ်းဆည်းထားသည့်အချက်အလက်များကိုဤနာမည်နှင့်ဖိုင်အသစ်တစ်ခုသို့သိမ်းဆည်းလိမ့်မည်။
Output fixed file name ကိုတိုက်ရိုက်ရိုက်ထည့်နိုင်သည်
ဖိုင်ကို browse နှင့် select လုပ်ပါရန် button ကို။
မှတ်ချက် - SOURCE drive သို့မဟုတ် disk ပေါ်ရှိသင်၏စာရင်းအချက်အလက်များကို Overwriting ကာကွယ်ရန်, SOURCE DRIVE သို့မဟုတ် DISK တွင်ထွက်ပေါ်လာသည့် fixed file name များကိုမရွေးပါနှင့်။
combo box ထဲရှိ output file ၏ format ကိုလည်းသင်သတ်မှတ်နိုင်သည်
။ Form ကို“ Determined Auto” အဖြစ်ထားခဲ့ရင်၊ DataNumen Outlook Drive Recovery သင်၏ကွန်ပျူတာတွင်တပ်ဆင်ထားသော Outlook ဗားရှင်းအရပုံသေဖိုင်များကိုထုတ်ပေးလိမ့်မည်။
ခလုတ်နှင့် DataNumen Outlook Drive Recovery အလိုလိုtarရွေးချယ်ထားသော drive (သို့) disk ကို scan ဖတ်ခြင်းနှင့်အီးမေးလ်များနှင့်အခြားအရာဝတ္ထုများကိုပြန်လည်ရယူခြင်း။ တိုးတက်မှုဘား
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ပြီးသောအခါ၊ drive (သို့) disk မှမည်သည့်အချက်အလက်ကိုမဆိုပြန်လည်ရယူနိုင်ပါက၊ အောက်ပါအတိုင်း message box တစ်ခုကိုတွေ့လိမ့်မည်။
ယခုတွင်သင်သည် Microsoft Outlook ဖြင့်ပုံသေ PST ဖိုင်ကိုဖွင့်နိုင်သည်။ folder တစ်ခုလုံး hierarchy ကိုပုံသေ PST ဖိုင်ဖြင့်ပြန်လည်တည်ဆောက်ပြီးအရာဝတ္ထုများကိုပြန်လည်သိမ်းဆည်းပြီးမူလဖိုင်တွဲများထဲသို့ထည့်ပါလိမ့်မည်။ l အတွက်ost ရှာဖွေတွေ့ရှိသောအရာဝတ္ထုများကို ၄ င်းတို့ကို Recovered_Group1, Recovered_Group2 စသည့်ဖိုင်တွဲများအတွင်း၌ထည့်သွင်းလိမ့်မည်။
DataNumen Outlook Drive Recovery ၃.၂ ကိုဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Outlook Drive Recovery ၁.၁ ကိုနို ၀ င်ဘာ ၅ ရက်၊ ၂၀၀၃ တွင်ထုတ်ပြန်သည်
DataNumen Outlook Drive Recovery 2.0 ကို ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၂ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်
Outlook 2013 ကိုထောကျပံ့ပါ။
DataNumen Outlook Drive Recovery ၂.၀ ကို ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၃ ရက်နေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည်
multi- တန်ဖိုးရှိဂုဏ်သတ္တိများ recover နှင့် convert လုပ်ဖို့ပံ့ပိုးမှု။
Microsoft Outlook 2010 ကိုထောက်ပံ့ပါ။
Windows 9x စနစ်များအတွက်လိုက်ဖက်တဲ့အရာ
Advanced Outlook Data Recovery 1.0 ကို ၂၀၀၉ ခုနှစ်အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်သည်
Outlook 97, 98, 2000, 2002, 2003 နှင့် 2007 ကိုကူညီပါ။
Windows 95, 98, ME, NT, 2000, XP, 2003, Vista နှင့် Windows7ကိုထောက်ပံ့သည်။
ပုံသေ PST ဖိုင်ကို Outlook 97-2002 format နှင့် Outlook 2003/2007 format ထုတ်လုပ်ရန်ပံ့ပိုးသည်။
မိဘမဲ့သို့မဟုတ်ပျက်စီးနေသော Microsoft Exchange အော့ဖ်လိုင်းသိုလှောင်မှုဖိုင်များမှမက်ဆေ့ခ်ျများနှင့်အခြားအရာများကိုပြန်လည်ရယူပါ။ost)
မှဖျက်ထားသောအီးမေးလ်များကိုပြန်လည်ရယူပါ Outlook Express dbx ဖိုင်များ။
အကျင့်ပျက်ခြစားမှုများမှအီးမေးလ်များကိုပြန်လည်ရယူပါ Outlook Express dbx နှင့် mbx ဖိုင်များ။
ပျက်စီးနေသော Microsoft Outlook အချက်အလက်ဖိုင်များ (.pst) ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ပါ။